"1 Ary teo anatin’ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an’i Joba ka nanao hoe: 2 Iza moa izato manao izay hahamaizina ny fisainana amin’ny teny tsy misy fahalalana? 3 Misikina ary tahaka ny lehilahy; Fa hanadina anao Aho, ka valio: 4 Taiza ary hianao, fony Aho nanorina ny tany? Ambarao, raha hainao. 5 Iza ary no nandidy izay ho refiny, raha fantatrao? Ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? 6 Teo amin’ inona no nanorenana ny vodi-andriny, ary iza no nametraka ny vato fehizorony, 7 Raha niara-nihira ny kintan’ny maraina, ary nihoby avokoa ireo zanak’Andriamanitra? 8 Ary iza no nanao varavarana misakana ny ranomasina, raha nibosesika nivoaka avy tany am-bohoka izy, 9 Raha nanao ny rahona ho fitafiany Aho ary ny aizim-pito ho fonony, 10 Ary nandidy ny ho fetrany sady nanisy hidy sy varavarana 11 Ka nanao hoe: Hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no hampijanonana ny fisafoaky ny onjanao? 12 Hatrizay niainanao moa mba efa nandidy ny maraina va hianao? Efa notoroanao ny fitoerany va ny fipoak’ andro, 13 Mba horaisiny ny sisin’ny tany. Ka hakopakopany hiala ny ratsy fanahy? 14 Ary hiova tahaka ny tanimanga tombohin-kase ny endriny, ka hiseho tahaka ny lamba misoratra ny tarehiny, 15 Ary hosakanana ny fahazavan’ny ratsy fanahy, ka ho tapaka ny sandry naingaina. 16 Moa efa niditra hatrany amin’ny loharanon-dranomasina va hianao, ary efa nandehandeha tany amin’ny fanambanin’ny lalina? 17 Moa efa naharihary taminao va ny vavahadin’ny fahafatesana? Ary efa hitanao va ny vavahadin’ny aloky ny fahafatesana? 18 Moa efa voadinikao ny hatrany amin’ny fahalalahan’ny tany? Ambarao ary, raha fantatrao izany rehetra izany. 19 Aiza ary no làlana ho any amin’ny fonenan’ny mazava? Ary aiza no fitoeran’ny maizina? 20 Mba hitondranao izany ho amin’ny faran’ny alehany, Ary ho fantatrao ny làlana ho any an-tranony. 21 Eny, fantatrao mantsy izany, satria efa teraka hianao tamin’izay, ary maro ny isan’ny andronao!" Joba 38:1-21
Tao anatin’ny tafio-drivotra. Raha ireo sakaizany no niresaka tamin’i Joba teo aloha, eto kosa dia Andriamanitra no mitafa aminy. Tsy amin’ny fisehoana tsotra tahaka ny an’olombelona anefa fa tao anatin’ny tafiodrivotra. Ahatsiarovana izay niseho tamin’ny Zanak’Isiraely tany an-tendrombohitra (Eksodosy 19:16-20). Izany no fomba nisehoan’Andriamanitra tamin’i Joba hahafantarany fa Izy Tompo Andriamanitra no miresaka aminy.
Fanadinana. “Misikìna ary tahaka ny lehilahy fa hanadina anao Aho”. Nanaraka izany ireo fanontaniana saro-baliana isan-karazany nataon’ Andriamanitra: -Taiza ianao fony Aho nanorina ny tany? Iza no nandidy izay ho refiny?-Teo amin’ny inona no nanorenana ny vodi-andriny?-Iza no nametraka ny vato-fehizorony?. . . Fanontaniana tsy hisy afaka hamaly na i Joba niantefany na isika mamaky ankehitriny.
Sombintsombiny ny fahalalantsika. Izany no fomba nentin’Andriamanitra naneho tamin’i Joba fa tsy mahalala ny zavatra rehetra ny zanak’olombelona fa voefatra ihany ny fahalalany. Nohamafisin’i Paoly Apostoly izany ka hoy izy:”sombintsombiny ny fahalalantsika” (I Korintianina 13:9a)
Tanteraka ny fanirian’i Joba. Naniry mihitsy i Joba hahita sy hahafantatra an’Andriamanitra (23:3). Tanteraka teto izany ka tsy ny fanatrehan’Andriamanitra ihany no tsapany fa ny famindrampony sy ny fitiavany ihany koa.
Manatrika izay rehetra tia Azy Andriamanitra. Ny teny navalin’Andriamanitra an’i Joba eto dia mampiseho fa eo anilan’izay rehetra miantso Azy amin’ny fo mahitsy sy marina Andriamanitra. Mbola hamaly antsika ihany koa Izy raha manatona Azy amin’ny fanetrentena isika.
Ny fitondran’Andriamanitra. Anisan’ny lesona goavana tsoahina avy amin’ity tantara eto ity koa ny fanekena izay fitondran’Andriamanitra rehetra ny fiainantsika na dia tsy takatry ny saina aza izany satria Andriamanitra dia mihevitra izay mahasoa antsika mandrakariva hananantsika fiadanana (Jeremia 29:11).
Fanentanana: Ekeo ny fitondran’Andria-manitra ny fiainanao dia hiadana ianao.